Noqo tafaariiqle mashruuceenna: isku toosin oo qaybi. | Abuurista khadka tooska ah
Ma u baahan tahay inaad naqshadeyso boodhadh, xaashi, Duub? Wax ka baro tabaha si loo gaaro saxsanaanta weyn u dhexeeya walxaha iyo si deg deg ah isku toosin. Waa muhiim in wax waliba xuddun u yihiin isla markaana sanduuq iskula jiraan.
Markii aan naqshadeynayno mashruuc Sawirka waan adeegsan karnaa qalab taasi waxay naga caawin doontaa inaan is waafajinno canaasiirta kala duwan taas oo ka kooban gabalkeenna. Intaa waxaa dheer, way noo oggolaan doontaa waqti badbaadi. Marka xigta, waxaan ku tusaynaa a cashar gaaban si aad u baratid sida loo isticmaalo.
1 Isku hagaaji Qalabka
2 Xullo walxaha
3 Isku toosin oo qaybi
4 La jaan qaado ...
5 Iswaafaji kala dheereynta
Isku hagaaji Qalabka
Marka hore, waanu ku tusi doonaa halka laga helo qalabkan. Waa inaad tagtaa liiska ugu sarreeya, tabka "daaqad" oo raadi ikhtiyaarka "safka". Waxaa lagugula talinayaa inaad kuhesho toobiye qalabkan goobta shaqada, maxaa yeelay isla marka aad barato isticmaalkeeda waxay noqoneysaa lama huraan.
Te daaqad ayaa soo muuqan doonta taas oo aad kugu hagi karto astaamaha badhan kasta si aad u fahamto waxa astaamaha mid kasta oo ka mid ahi leeyahay: isku toosin bidix, xarunta, iyo kuwo kale.
Markaan helno walxaha miiska shaqada waa inaan iyaga dooro. Kaliya kuwa aan dooneyno inaan is waafajino. Si aan uxulno in kabadan hal cunsur, waxaan qaban doonaa furaha "wareejinta" oo waxaan gujin doonnaa dhamaan walxaha aan dooneyno inaan doorano Si loo fahmo fikradda si fudud, waxaan ku lifaaqnay sawir hoose oo muujinaya waxa kor lagu sharaxay.
Isku toosin oo qaybi
Daaqada qalabka waxay noo ogolaaneysaa: isku toosin oo qaybi. Farqiga u dhexeeya labadoodaba waa mid fudud.
Safka: Waxyaabaha waxaa loo waafajin karaa mid kasta oo ka mid ah afarta dhinac ee sanduuqa wax lagu xidhayo, ama xaruntiisa si toos ah iyo xag ahaanba ah
Dqaybi: Adiga oo adeegsanaya astaantan waxaan ka dhigeynaa walxaha la soo xulay inay ku sii jiraan isla masaafada u dhexeysa meesha la xushay ama sabuuradda. Taasi waa, haddii aan dooranno ikhtiyaarka "U qaybi dhanka bidix", inta udhaxeysa dhinaca bidix ee shay iyo sheyga xiga ee la xulay waxaa jiri doona masaafo isku mid ah oo u dhaxeysa iyaga.
La jaan qaado ...
Aad ayey muhiim u tahay inaan xulashada saxda ah u dooranno ujeedkeenna. Waxaan tixraacnaa tabtaLa jaan qaadoTaasoo ina siin doonta kala doorashada:
La xul xulashada
La jaanqaad shayga muhiimka ah
La jaanqaad sabuuradda
Haysashada mid ama doorsoomayaal kale oo la xushay waxay na siin doontaa natiijooyin gebi ahaanba ka duwan, sidaa darteed, hubi inaad qaybtaan si wanaagsan u calaamadeysay.
Iswaafaji kala dheereynta
Iyada oo aaladda «Align» sidoo kale waxaan u qaybin karnaa masaafada koox walxaha ka mid ah iyo meelaha u dhexeeya. Tusaale ahaan, sida aan ku arki karno sawirka hoose, waxaan haynaa saddex icons oo lagu qaybiyo miiska shaqada. Haddii aan rabno inaan hubinno in booska u dhexeeya uu isku mid yahay, oo aan gaarno naqshad iswaafajinaysa, waa inaan raacnaa tallaabooyinka soo socda:
Xulo dhammaan walxaha aad rabto.
Tag qolka aaladda.
Xullo xulasho: La jaanqaad xulashada.
Guji ikhtiyaarka: U qaybi kala dheereynta si siman.
Tallaabooyinkan ka dib waxaan lahaan doonnaa walxaha si qumman u dhexeyn doona, taas oo ah, iyadoo isla fogaansho. Haddii aan rabno inaan xitaa ka taxaddarno, waan karnaa qaybin walxaha.
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad isku daydo oo aad ku ciyaarto xulashooyinka kala duwan. Haddii aad ku tababarto waxaad heli doontaa firfircooni kugu filan oo aad ku adeegsato qalabkan oo aad waqtiga ugu ilaaliso shaqadaada. Sidoo kale, waad hubin doontaa hel natiijo naqshad nadiif ah iyo fiiro gaar ah oo faahfaahsan.
Shisheeye oo qaybi!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » In lagu faahfaahiyo naqshadeyntayada: isku toosin oo qaybi